Ngubani uAmenadiel? Ngaba Uyingelosi Yokuqala Ukudalwa nguThixo? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ngubani uAmenadiel? Ngaba Uyingelosi Yokuqala Ukudalwa nguThixo?
Mhlawumbi ukhe weva igama lengelosi uAmenadiel ngaphambili. Ukanti kunzima ukumazi ukuba ungubani kanye kanye nokuba lithini ibali lakhe. Fumana apha.
Ukuba uyazi kancinci ngebhayibhile, iingelosi, okanye ukhe wabukela uLusifa uthotho lweNetflix, igama elithi Amenadiel lisenokuba sele likukhalimele intsimbi. Nangona, okufanayo akunakuthethwa malunga nembali kunye nemvelaphi yakhe, engaqondakaliyo. Silapha ukutyhila apho sivela khona, ukuba ungubani kwaye kutheni kufuneka ufunde konke ngaye.
UAmenadiel wayeyingelosi yokuqala uThixo awayidalayo
UAmenadiel wayeyingelosi yokuqala ukubakho, ngoko ngoyena mkhulu nohloniphekileyo kubo bonke. USathana noLusifa, nabo babeziingelosi ezidalwe nguThixo, ngoko ke ngabazalwana baka-Amendiel, nangona kunjalo i-trio ekugqibeleni yahamba yahlukana phakathi kweminyaka kwaye yenze ikhosi yembali esiyiqhelileyo.
> Yiya inyathelo elinye ukuya phambili kwaye bala inombolo yakho yengelosi Apha<
Ngaba ujonge uthando lokwenyani kunye nolonwabo? Qhagamshelana nengcali yePsychic ngolwazi olungakumbi ngekamva lakho
Waziwa njengeNgelosi ewileyo
Ngokutsho kweCawa yamaKatolika, zonke izithunywa zezulu zadalelwa ukuba zilungile, kodwa ezinye ziba ngendawo zize zimjikele umdali wazo. Ekuqaleni, uThixo wadala izithunywa zezulu ezithathu: uLusifa, uMikayeli noGabriyeli, nganye ikhokela isithathu sezithunywa zezulu ezingama-72. Ngokusebenzisana nezithunywa zakhe, ULusifa wakhokela ekuvukeleni uThixo waza wafuna impindezelo. Wayeyingelosi enemvukelo, eyayisoloko ifuna ukushenxisa uThixo etroneni yaza ekugqibeleni yagxothwa ezulwini yaza yaphulukana namaphiko ayo. Ngexesha lemvukelo, uAmenadiel waqala ngakwicala likayise waza walwa ukuze abhukuqe amandla kaThixo. Yile nto kwamenza ukuba abe yingelosi ewileyo.
Ngaba unomdla kwiingelosi? Ukuba kunjalo, fumanisa ukuba ngubani na isithunywa sakho .
Ukubona i-21: Iyure ye-Mirror ebuyiselweyo i-21: i-Reversed Mirror iyure luphawu lokuhamba ngeengcinga ezilungileyo